27 Archives - Tameelay
ကျမက ပတ်ဝန်းကျင်ကိုသိပ်ဂရုမစိုက်တတ်ဘူး …ကိုယ်ကကောင်းအောင်နေတယ်လေ။အမြင်ကြည်တာမကြည်တာ သူတို့အပိုင်း ..ကျမကမှန်တယ် ထင်ရင်ဘယ်သူတားတားလုပ်တတ်တယ်။ဖေဖေ ကတော့ အဲ့ဒါ တဇွတ်ထိုးဆန်တာတဲ့ ။ ကျမပြုံးနေလိုက်တယ်။ကိုယ့်ခံယူချက်ပဲလေ။ကိုယ်ကအမှားကင်းသူမဖြစ်နိုင်တော့အမှားနည်းအောင်ဆင်ခြင်တယ်။ တကယ်တမ်းစဉ်းစားကြည့်လေ .. ပတ်ဝန်းကိုဂရုမစိုက်နိုင်အားလေပဲ။“ချီးမွမ်း (၇)ရက် ၊ကဲ့ရဲ့(၇)ရက်´´ဆိုတာမှားတယ်။ချီးမွမ်းတာ(၇)ပြည့်ချင်မှပြည့်မယ်။ကဲ့ရဲ့စကားကတော့ ကြုံရင်ကြုံသလိုပြောနေကြမှာပဲ။ ကောင်းတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာတော်တော်ရှားပါတယ်။လူတွေတော်တော်များများကကိုယ့်ထက်သာရင် မနာလိုတတ်တဲ့အကျင့်ကရှိနေတော့ ဂုဏ်ပြိုင်တယ်၊ ပိုက်ဆံပြိုင်တယ်၊ စီးပွားရေးပြိုင်မယ်၊ အဝတ်အစားကအစ သားသမီးကိစ္စအဆုံး .. ကိုယ်ကသာ ..သာချင်ကြတာလေ။ကျမ လက်စွဲထားတဲ့စာသားလေးက`ပတ်ဝန်းကျင်စကားအလေးထားကသွားမယ့်အရေးတစ်လှမ်းနှေး၏´တဲ့။ ပတ်ဝန်းကျင်ကပေးတဲ့ အပြစ်တင်ဝေဖန်သံတွေက ကျမခြေလှမ်းတွေကို တုံ့နှေးစေခဲ့ဖူးတယ်။ စိတ်ဓာတ်ကျခဲ့ဖူးတယ်။ နောက်တော့မှ ..သူတို့ပေးတဲ့ ဒဏ်ရာတွေကပဲ ကျမအတွက်မခံချင်စိတ်ဖြစ်ခဲ့ရတာ။အဲ့ဒီစိတ်နဲ့ကြိုးစားခဲ့တာခုချိန်ထိ။သူတို့ပြောသလိုမဖြစ်စေရဘူး။ ငါ့ဘဝကို သူတို့ထင်မြင်ချက်နဲ့လွဲမှားစေရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပေါ့။ကိုယ်ကောင်းရင်ခေါင်းမရွေ့ပါဘူး။ ကျမကိုချစ်တဲ့သူတွေက ကျမရဲ့အပြစ်တွေတွေ့ခဲ့ရင်တောင် နားလည်ခွင့်လွှတ်ပေးကြလိမ့်မယ်။ ကျမကိုကြည့်မရတဲ့သူ .. မုန်းတဲ့သူတွေကတော့ .. ကျမဘယ်လောက်ကောင်းအောင်ကြိုးစားနေပါစေအပြစ်ရှာဝေဖန်ကြလိမ့်မယ်။ ကျမအတွက်ကတော့ကိုယ့်လမ်းကိုယ်ဖောက်မယ်။အနာဂတ်ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဖန်တီးမယ်။ကျမလည်းလူသားမို့ကောင်းတာရှိသလိုမကောင်းတာလည်းရှိနိုင်တယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် ကျမအကြောင်းစုံစမ်းချင်ရင် .. ကျမကိုချစ်တဲ့သူ ..မုန်းတဲ့သူ ထိုသူတွေဆီမှာ မေးမြန်းစုံစမ်းပါ။ … Read more
Categories General Knowledge Tags 27
မိမိနေထိုင်ရာ လောကကြီးတွင် သူငယ်ချင်းအဖြစ် မပေါင်းသင်း မပေါင်းအပ်သော လူများ၏ အကြောင်းများကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ ၁။ အလိုက်သင့်ပေါင်းပြီး အတွင်းကြိတ်မကောင်းကြံသောသူမိမိအားအလိုက်သင့် ရေလိုက်ငါးလိုက်ပေါင်းသင်းကာ မိမိအားနည်းချက်များကို အခွင့်ကောင်းယူကာ တိုက်ခိုက်တတ်သော သူမျိုးပင်ဖြစ်သည်။ သူတစ်ပါးမျက်ရည်ကို လမ်းခင်းကာ နင်းချပစ်လေ့ရှိသော သူများပင် ဖြစ်သောကြောင့် ထိုသူများကို စွန့်ခွာသင့်ပါတယ်။ ၂။ လိုရင်တစ်မျိုး၊ မလိုရင်တစ်မျိုး ဆက်ဆံတတ်သူမိမိထံမှ အခွင့်အရေးလိုချင်လျင်တစ်မျိုး၊ အခွင့်အရေးမရနိုင်လျင်တစ်မျိုး၊ အခြေအနေပေါ် မူတည်ပြီး အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲ ဆက်ဆံတတ်သော သူများကို ရှောင်ကျဉ်သင့်ပါတယ်။ မိမိအောင်မြင်ချိန်တွင် မိမိထံ၌ ရှိနေပြီး ကျရှုံးချိန်တွင် စွန့်ခွာတတ်သော “သာကူး” လူမျိုးပင် ဖြစ်သည်။ ၃။ မိမိကောင်းစားရေး အတွက် သူတစ်ဖက်သားကို ချောက်တွန်းတတ်သူမိမိလျောက်လှမ်းရာ ခြေလှမ်းတိုင်းတွင် သူတစ်ပါးကို နင်းချေပြီး လျောက်တတ်သော လူစားမျိုးဖြစ်သည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် ဆိုသော် … Read more
“ဒီလို ယောင်္ကျားမျိုးနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့ အချိန်မှသာအိမ်ထောင်ပြုဖို့ စဉ်းစားပါ…”
June 27, 2020 by daddy
“ဒီလို ယောင်္ကျားမျိုးနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့ အချိန်မှသာအိမ်ထောင်ပြုဖို့ စဉ်းစားပါ…” မိန်းကလေးတိုင်းဟာအချစ်ရေးမှာကံကောင်းချင်ကြပါတယ်။ ကိုယ့်အပေါ်ပျော်ရွှင်မှု၊ဂရုစိုက် မှုပေးနိုင်ပြီးသစ္စာရှိတဲ့ယောကျာ်းမျိုးနဲ့ပဲဆုံဆည်းချင်ကြပါတယ် …… ။ အောက်ပါအချက်လေးတွေနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ ချစ်သူကောင်လေးမျိုးကိုရထားပြီးပြီဆိုရင် သင်ဟာပတ်ဝန်းကျင်မှာရော သူငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းကြားမှာပါသင့်ကိုဝိုင်းပြီး အားကျရမယ့်ပျော်ရွှင်ဖွယ် အချစ်ရေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ် ….. ။ ၁။ဦးစားပေးမှုမှာ သင်ကနံပါတ်တစ်ပဲ ။ အလုပ်နဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်အသိုင်းအဝိုင်းမှာ ဖြစ်စေ သူငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းကြားမှာ ဖြစ်စေသင်နဲ့ယှဉ်ရမယ့် ကိစ္စမျိုးရှိလာခဲ့ရင်သင့်ကိုပဲ ပထမဦးစားပေး ရွေးချယ်မယ့်သူမျိုးပါ။ သင်ရဲ့ ပျော်ရွှင်မှု၊ကျန်းမာရေးကိုလည်း သူကအမြဲစောင့်ရှောက်တတ်တဲ့သူမျိုးပါပဲ …. ။ ဒီလို ယောင်္ကျားမျိုးနဲ့ တွေ့ဆုံတဲ့အချိန်မှသာ အိမ်ထောင်ပြုဖို့ စဉ်းစားပါ။ ၂။ရင်ဖွင့်စကားတွေနားထောင်ပေးပြီး အမြဲအားပေးသူမျိုး ။ သင်က ရင်ဖွင့်စရာတောင် မလိုပါဘူး။ သင့်မျက်နှာမှာ အလိုမကျတာတွေ့ရင် သူက ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာကို သိနှင့်ပြီး သင့်မကျေနပ်ချက်တွေကို မေးမယ့်သူမျိုးပါ။ သင်ရဲ့အခက်အခဲတွေမကျေမနပ်ဆိုလာတဲ့ ရင်ဖွင့်စကားတွေကိုဂရုတစိုက်နားထောင်ပေးပြီးအကြံဉာဏ်ပေး မယ့်သူမျိုးပါ …. … Read more